Ny vola elektronika - ny fiantraikany sy ny tsy fampiasany azy ireo
Ny vola elektronika - ny karazana fandoavam-bola be indrindra
Ny vola elektronika - ny fomba mahazatra amin'ny fividianana, izay nofaritan'izy ireo tao amin'ny Internet ihany. Tahaka ny karatry ny banky, maro ny asa atao dia mitovy: ny fandoavana ny entana any amin'ny firenena, ny fandoavana ny serivisy, ary ny fifanakalozana vola mihitsy aza amin'ny vola ilàna azy. Misy fahasamihafana, izay tokony hodinihina rehefa mamorona kitapom-boly virtoaly.
Inona no vola elektronika?
Maro ireo mpampiasa aterineto no efa miasa am-pahibemaso miaraka amin'ny vola virtoaly, ary ny manam-pahaizana amin'ny rafitra elektronika dia miezaka mafy ny hahatratra ny mpifaninana amin'ny fanomezana asa. Ny vola elektronika dia teny iray ampiasaina amin'ny marika maromaro:
Rafitry ny fitehirizana sy ny famindrana ny volam-pirenena sy tsy miankina.
Ny adidy ara-bola ataon'ny tompon'andraikitra, izay voatahiry amin'ny media elektronika.
Tapakila virtoaly tena ilaina ho an'ny mpikirakira aterineto izay mahazo vola amin'ny Internet . Ireo poketra ireo dia mandray anjara amin'ny EPS - rafitra fandoavam-bola elektronika, manatanteraka ny asan'ireo banky virtoaly. Miasa vitsivitsy izy ireo, ny fifandraisana sasany aza dia manome ny mpampiasa ny fahafahana mandoa vola avy amin'ny kitapo iray mankany amin'ny iray hafa. Manamboatra plastika plastika izy ireo, ary ekena amin'ny terminal. Ny vola elektronika dia apetraka amin'ny banky, manampy amin'ny fametrahana vola amin'ny tena vola. Misy fomba roa hanaovana izany:
Amin'ny alalan'ny finday.
Amin'ny alàlan'ny banky Internet.
Ny vola elektronika - ny fiantraikany
Ny vola elektronika vaovao dia manana ny tombontsoa sy ny tsy fahampiana, ka tsy mbola nahazatra loatra ny fampiasana izany. Saingy noho ny fiovan'ny rafitra ataon'izy ireo dia mety hitranga izany rehefa mandeha ny fotoana. Tsia amin'ny vola elektronika:
Fitsipika ara-dalàna . Ny vola virtoaly any amin'ny firenena maro dia tsy manaiky, ny fanaovana akanjo goavana amin'izy ireo dia tsy hiasa.
Draharaha . Tsy ny rehetra no mampiasa vola virtoaly, ny fividianana azy dia sarotra kokoa.
Fiantsoana ny teknolojia . Raha mijanona tsy misy hazavana na Internet ianao dia hikatona ny fidirana amin'ny vola.
Ny volan'ny elektronika:
Speed . Voaray avy hatrany ny vola aloanao, azonao atao ny mandoa vola any amin'ny firenena hafa.
Automation . Ny famindrana rehetra dia natao, ny asa atao dia ataon'ny solosaina.
Ny fiarovana . Ity vola ity dia tsy azo alaina na voavolavola, tsy ho very na hangalatra. Ny hetsika rehetra dia azo arovana amin'ny rafitra.
Fiarovana . Ny famadihana ny vola elektronika na kitapo dia tena sarotra. Ny mangalatra dia midika hoe, raha nampiasa tambajotra sosialy ny mpampiasa.
Ny tombony amin'ny vola elektronika
Na dia mitovy aza ny fandoavam-bola amin'ny Internet, ny vola virtoaly dia mbola manakaiky ny vola: ny tarehimarika dia zaraina, ny tsipirian'ny antoko dia fantatra. Manana tombon-tsoa maromaro ny fananana ny vola elektronika:
Ny fandoavam-bola dia mizara marina tsara.
Vidim-bola madinika: hamoronana vola virtoaly tsy mila taratasy sy loko.
Tsy voatery haverina amin'ny laoniny ny vola, fa mandoa vola.
Tsy ilaina ny fiarovana rehefa mitahiry vola be.
Fanamafisana ny rafitra fiarovana.
Ny habetsaky ny kitapo dia voatahiry ela be, tsy mila mandoa zanabola ianao amin'ny fanompoana.
Ny tsy fahampian'ny vola elektronika
Ny fampiasana vola elektronika dia manana ny tsy fandraisany. Ny iray amin'ireo tena azo tsapain-tanana dia miankina tanteraka amin'ny ordinatera izay napetraka ireo dossiers. Raha tsy voafehy ny PC, dia tsy afaka miditra ny kitaponao ianao. Misy fahasamihafana hafa:
Fifandraisana Internet ho an'ny asa. Tsy ny olon-drehetra fa tsy ny fahafahana handeha any anaty aterineto foana, ka amin'ny fotoana sasany dia voafetra ny fidirana amin'ny vola.
Tsy azonao mivantana mivantana avy any amin'ny mpandoa iray hafa ny vola.
Ny fitaovan'ny fiarovana ny kriptografika dia tsy ampy tanteraka ary voamarina, toy ny fitondran-tena amin'ny fampiasana vola elektronika - mbola tsy fantatra.
Elektronika vola - karazana
Ny karazana volan'ny elektronika dia ny rafitra RUpay, Stormpay, Moneybookers, Liqpay, "Kitapo iray", "Money Mail", saingy tsy dia ampiasaina izy ireny. Ny tena manan-danja dia ny manapa-kevitra hoe inona no tanjon'ny valantserasera virtoaly, ka tsy hisy ny fahadisoam-panantenana sy ny fifandimbiasana. Noho ny fividianana sy ny fandoavam-bola amin'ny aterineto ao Rosia, ny rafitra rehetra dia afaka miasa, fa amin'ny alàlan'ny fandoavam-bola ivelany, WebMoney no tsara indrindra. Samy hafa ny valizy:
Ny fomba famenoana: ATM, mobile, karatra.
Komisiona ho an'ny hetsiky ny vola.
Fiantohana ny fiarovana ny angona sy ny fifandraisana amin'ny mpampiasa.
Ny lazan'ny serivisy.
Inona no vola elektronika tsaratsara kokoa? Ny rafitra fandoavam-bola malaza hatramin'izao:
WebMoney, manaiky amin'ny fivarotana aterineto rehetra, serivisy mahomby;
Yandex-Money, dia mandray rubles, interface tsotra;
Kiwi, tsy dia malaza sy mivarotra an-tserasera, fa mora aloa amin'ny famatsiana amin'ny serivisy.
Ny rafitra elektronika dia manana fitsipika momba ny fampiasana azy, izay tokony ho raisina an-tsakany. Iray amin'ireo voalohany nipoitra ny WebMoney Transfer, izay mitazona toerana ambony ao amin'ny laharana. Nampiasain'ireo mpisera miteny Rosiana an'hetsiny izany, nefa tsy ny rehetra no mahalala fa any amin'ny firenena sasany dia voarara ny mandoa vola toy izany. Fomba hafa:
Ny rafitra dia miara-miasa amin'ny vondrona efatra vola: ny dollar, ny grenady, ny Belarosiana ary ny Ruble rosiana.
Ny asa rehetra dia atao: avy amin'ny fandoavam-bola.
Azonao atao ny mameno ny kitapo ao amin'ny Savings Bank, amin'ny alàlan'ny karatra sy ny birao fifanakalozana.
Mba hanamarinana ny maha-izy azy, dia misy pasipaoro efa voamarina.
Ny fandroahana ny vola dia omena ny kaonty any amin'ny banky, izay nohamafisina.
Ny komisiona dia tsy mandoa vola any amin'ny fanjakana.
Ny vola elektronika Yandex
Ny faharoa malaza ao amin'ny rafitra Aterineto dia Yandex-Money , natomboka tamin'ny 15 taona lasa izay ho an'ny Rosiana, noho izany dia mifantoka afa-tsy amin'ny vola vahiny izy io. Tsy afaka mandefa vola amin'ny hafa ianao. Ahoana ny fampiasana ny valizy elektronika amin'ny Yandex-Money:
Mamoròna mailaka ao amin'ny Yandex, sokafy ny takelaka "Money" ao aminy ary tsindrio ny bokotra "Open Wallet". Tafio amin'ny nomeraon-telefaoninao.
Ny kaonty dia naverina tamin'ny alalan'ny terminal, ATM sy ny banky ary ny vola dia nesorina - ho an'ny karatra Yandex-Money na karatra iray avy amin'ny lisitry ny banky.
Tsy nesorina ny komisiona ho an'ny hetsika maro.
Miankina amin'ny tranokala na tsia ny mpividy.
Ny vola Kiwi virtoaly elektronika dia mihoatra ny pipeline ao amin'ny CIS, saingy tsy dia mampiasa ny rafitra an-tserasera ity magazay ity. Asa maro no tanteraky ny terminal. Ao amin'ny fampidirana am-po ny:
Ny kitapo dia mifamatotra amin'ny laharana finday.
Azonao atao ny mametraka vola amin'ny alalan'ny finday, ATM ary terminal.
Ao anatin'ireo vola efatra: rubles, dollars, euros ary Kazakhstan tenge.
Ny fandoavam-bola dia mandeha amin'ny terminal na karatra.
Ny komisiona dia eo amin'ny 2% amin'ny fifampiraharahana rehetra.
Amin'ny alalan'ireo fenitra Eoropeana, ny vola elektronika tsara indrindra dia PayPal avy amin'ny tontolon'ny serivisy eran-tany, izay ekena amin'ny fanjakana 203. Vao haingana, ny rafitra dia nanampy ny fanohanana ny vola vaovao. Tsy toy ireo tolotra hafa, ny PayPal dia miasa amin'ny vola tena izy, ny karatra na ny kaonty dia mifamatotra amin'ny kaontin'ny mpampiasa. Hita tao Rosia tamin'ny 2003 ity rafitra ity, fa ny Rosiana kosa dia afaka nahazo sy nanaisotra ny vola efa-taona lasa izay. Noho izany, ny mpividy PayPal dia tsy malaza indrindra, ny mpividy dia manolotra karazana freelancers toy izany.
Avy amin'ny sehatra mahasoa PayPal manam-pahaizana manokana:
Asa maro karazana.
Miasa amin'ny vola amin'ny tranonkala mobile.
Fandefasana faktiora ho an'ny fandoavam-bola amin'ny lahatsoratra.
Vao haingana dia nisy karazana vola elektronika vaovao niseho - Easypay, sehatra virtoaly virtoaly ao Belarosia, ny kajy dia amin'ny ruble ao an-toerana. Noforonina ho alternative ho an'ny WebMoney. Misy rafitra fiarovana azo antoka, tsy misy analoges - code codes amin'ny fotoana iray. Misy tombony hafa:
Ny fandikan-teny dia atao amin'ny Internet sy finday iray.
Ampio mora amin'ny kaonty mora na amin'ny birao.
Vaomiera ao anatin'ny firenena - 2%, noho ny fisintonana vola - 1.5%.
Ho an'ny hetsika sasany dia tsy nesorina ny lany:
fividianana fivarotana amin'ny aterineto any Belarosia;
bola ho an'ny serivisy amin'ny aterineto;
tapakila mankany amin'ny sinema sy ny teatra.
Ny vola elektronika bitcoin vaovao dia antsoina hoe fandrosoana vaovao ao amin'ny tambajotran'ny serasera ao amin'ny aterineto, karazana anôlôma kominista ao amin'ny virtoaly. Ny mpanoratra dia manondro an'i Satoshi Nikamoto, bitcoins voatahiry amin'ny kitapo manokana, azonao atao ny mameno sy manonitra ny vola. Ny fitomboan'ny vidim-pitomboana sy ny lazan'izao tontolo izao, na dia tsy manam-pahefana na rafitra aza ity rafitra ity, dia tsy azo atao ny mitarika ny fandikan-teny avy any ivelany. Tsy misy ny komisiona ihany koa, ny karama ho an'ny mpitrandraka fotsiny ho fanohanana ny fifamoivoizana.
Bitcoin dia vola ara-elektronika manokana, misy izy ireo:
Independence . Ny rafitra dia mahaleotena tanteraka.
Famaritana ny bitcoins.
Anarana tsy misy anarana . Ny tarehimarika finday tompon'ny tompony dia tsy azo alaina.
Tsy misy mpanelanelana . Ho an'ny famindrana banky, tsy mila banky ianao, fa ny tsy fitoviana dia ny tsy ahafahanao manafoana ny fandaniana.
Illegality . Ny governemantan'ny firenena maro dia miantso azy ireo ho tsy ara-dalàna.
Ny tsy fahavitrihan'ny fianarana.
Ahoana no hahazoanao vola elektronika?
Ahoana no ahazoana vola elektronika ao amin'ny Internet - ity fanontaniana ity dia anontanian'ny mpiserasera an'arivony isan'andro. Mitadiava lesona iray izay hitondra vola miditra ao amin'ny tambajotra dia tena marina, saingy tsy be dia be. Misy varotra amin'ny fifanakalozana, fa noho izany dia mila manana fahalalana sy renivola ianao. Misy ny nicha miaraka amin'ny tombony maoderina kokoa noho ny fifindramonina ara-bola.
Raha esorinao ireo tetika mety hitera-doza, dia raiso ny karama azo avy amin'ny karama toy izao:
Sampana fanavaozana amin'ny tetik'asa ara-barotra.
Fiantohana amin'ny lalao an-tserasera.
Manome tolotra isan-karazany.
Business ao an-trano - hevitra
Inona ny fahasamihafana eo amin'ny diplaoma sy maîtrise?
Ady amin'ny fanoherana
Business amin'ny tànana manokana
Ahoana ny hanoratanao lahatsoratra amin'ny gazety?
Fanaparitahana - inona ary izany ary nahoana ianao no mila mamolavola?
Tranolay fialantsin-drivotra miaraka amin'ny fatana
Fanatanjahan-tena mifoka rivotra Strelnikova noho ny fahaverezany
Ny fanaintainana eo amin'ny tratra rehefa kohaka
Ny soritr'aretin'ny dysbiosis ankizy
Sakafo miaraka amin'ny ronono - recipe
Manao ahoana ny fitafiana maina haingana?
Ahoana no mampiseho ny tsy fahampian'ny alika?
Ahoana no hanesorana ny sombina amin'ny lohan'ilay zaza?
Bozaka - tsara sy ratsy
Ny mari-pamantarana pregnancies - isan-kerinandro
Ny ronono madio dia tsara sy ratsy
Kiraro ortopedika ho an'ny ankizy
Ahoana no hamantarana ny ady diso?